सुनको मुल्यमा नयाँ रेकर्ड, कतिमा हुदैछ कारोबार ? « गोर्खाली खबर डटकम
सुनको मुल्यमा नयाँ रेकर्ड, कतिमा हुदैछ कारोबार ?
काठमाडौं । सुनको मुल्य आज पनि बढेको छ । अघिल्लो दिनको तुलनामा प्रतितोला पाँच सय रुपैयाँले बढेर सुनको बिहीबार पुनः नयाँ कीर्तिमान कायम भएको हो । आज प्रतितोला पाँच सय रुपैयाँले बढेको सुन ९४ हजार पाँच सय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । यस्तै तेजाबी सुनको मूल्य भने प्रतितोला ९४ हजार ६५ रुपैयाँ पुगेको छ ।
चाँदीको मूल्य अघिल्लो दिनको तुलनामा तोलामा १० रुपैयाँले वृद्धि भएर प्रतितोता मूल्य ११ सय ४५ रुपैयाँ कायम भएको छ । सुनको मूल्य बढेसँगै बजारमा सुनचाँँदी खरिद गर्ने ग्राहक नभएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ ।
प्रतिनिधिसभा विघटन ः जवाफी बहस शुरु